Who were Bengali, so called Rohingya?: အမျိုးသားရေးဘက်က ရပ်ကြပါ
သို့သော် ယခုကိစ္စသည် တပ်မတော် အစိုးရနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စမဟုတ်၊ အမျိုးသား ရေးဖြစ်သည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် မြန်မာနိုင်ငံထဲကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထိုးဖောက် လာခဲ့သည့် ကုလားများက သမိုင်းတွင် မရှိသည့် လူမျိုးစုနံမည်ကို ဖန်တီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင် တရားဝင်ခြေကုတ်ယူဖို့ လုပ် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ချင်း သဘောထား ကွဲပြားမှုများကို ဘေးချိတ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံ တကာမျက်နှာစာမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ရမည့် အချိန်ဖြစ်ပါ၏။ မြန်မာမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာမရှိ။ မူဆလင်ဘာသာဝင် ကုလားများသာ ရှိသည်ဆိုသည်ကို ပြောရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကို သိပြီး အမျိုးသားရေးဘက်က ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် မိမိသိသမျှကို မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ချင်း သဘောထား ကွဲပြားမှုများကို ဘေးချိတ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံ တကာမျက်နှာစာမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ရမည့် အချိန်ဖြစ်ပါ၏။
AsaMyanmar citizen, I stand for my country. I never heard of Rohingya in the past. Shameful behavior of them. They took advantage
of 1) that Rakhine people are religious Buddhists.
2) Last time our country's unstable condition.
Our people, please stand for Rakhine people. Time to protect our Rakhine people!!!